Ukuhamba wedwa noma ngeqembu elihlelekile - Yikuphi kulokhu okubili engikukhethayo? | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | abanye
Wake wazibuza ukuthi ngabe ukuhamba wedwa noma eqenjini elihleliwe? Kufanele kushiwo ukuthi ngumbuzo okungelula ukuwuphendula ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwanoma yini ngoba kuyo sithola izinketho ezimbili ezisemthethweni ngokuphelele nezinzuzo zazo kanye nokubi.
El ukuhamba Kungaba isipiliyoni kuphela kepha ukuhamba ngeqembu elihleliwe akukude kakhulu. Ngakho-ke, lapho sinokungabaza, kungcono ukuthi sihlaziye wonke amaphuzu asemqoka, ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina. Ngabe ufuna ukunquma unomphela? Sinesixazululo!
1 Ukuhamba wedwa: Ubuhle nobubi obukhulu
1.1 Izinzuzo zokuhamba wedwa
1.2 Ububi bokuhamba wedwa
2 Ukuhamba ngeqembu elihlelekile: Yebo noma cha?
2.1 Izinzuzo zokuhamba njengeqembu
2.2 Ububi bokuhamba ngeqembu
3 Ukuhamba wedwa noma ngeqembu elihlelekile?
Ukuhamba wedwa: Ubuhle nobubi obukhulu
Izinzuzo zokuhamba wedwa
Ngaphandle kokungabaza, enye yezinzuzo ezinkulu zokuhamba wedwa ukuthi unayo inkululeko enkulu kakhulu ukunquma. Ngakolunye uhlangothi, endabeni yamashejuli ngakolunye uhlangothi, nasezindaweni ozozivakashela. Ngoba noma ngabe uphethe okungaphezulu noma okuncane ohlela ukukwenza, izinhlelo zingahlala zishintshwa ngomzuzu wokugcina futhi lokhu kukunika leyo nkululeko esiyishilo. Ngaphezu kwalokho, njengoba konke kusebenza ku-akhawunti yakho, kuyiqiniso ukuthi ungonga imali enhle lapho ukhetha indawo oya kuyo, uhlela uhambo uqobo, amahhotela, njll.
Ububi bokuhamba wedwa
Kubantu abaningi abane- umkhuba wokuhamba wedwaAzinazo izingqinamba kanjalo. Kepha uma kufanele sigqamise noma yikuphi, ngukuthi kufanele sihlele lonke uhambo. Ngakho-ke kungaba yingxenye ephelele. Njengoba kuzosithatha isikhathi eside futhi mhlawumbe, kwesinye isikhathi senza iphutha ekukhetheni ihhotela noma kweminye imisebenzi enenkontileka. Kepha uma lolu hlobo 'lwemininingwane' lwenzeka futhi kuyi-anecdote engeza ezimpilweni zethu. Kwabaningi, ukuba wedwa nakho kuyimpi ekhuphukayo lapho kwenzeka ukuphazamiseka okuthile, ngoba ngeke siluthole usizo.
Ukuhamba ngeqembu elihlelekile: Yebo noma cha?
Izinzuzo zokuhamba njengeqembu
Enye yezinto eziyinhloko ukuthi uzohlangana nabantu abasha, ngakho-ke futhi kuzoba esinye sezikhathi ezihamba phambili zohambo. Ngakolunye uhlangothi, uma uhambela kwamanye amazwe lapho ulimi lungaba yinkinga, iqembu ngeke lisaba njalo. Ngoba kuzohlala kukhona umhlahlandlela noma umxhumanisi wohambo olwenziwayo ozonakekela konke. Uma kungenjalo, phakathi kozakwenu, impela kukhona umuntu ozivikelayo. Unokuvikeleka okuningi, ngoba noma ngabe konke kuhamba kahle, noma uma kuvela inkinga, uyohlala uzungezwe abantu. Ngakho-ke kuzo zombili lezi zimo, kungenzeka ukuthi konke kungcono. Futhi, yini okuhle kakhulu kunokwabelana ngezikhathi ezinhle kakhulu zempilo yethu? Ngakolunye uhlangothi, akumele sikhohlwe ukuthi akudingeki ukuthi sihlele noma yini futhi yisikhathi nobuhlungu bekhanda esilondolozayo. Yize mhlawumbe lolu hlobo lohambo luxhunyaniswe nomqondo wokuthi olwabantu asebekhulile kuphela, akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni, ngoba bayanda abantu abasha abangena kulo.
Ububi bokuhamba ngeqembu
Kwabaningi kakhulu, enye yezinto eziphambili Ububi bokuhamba ngeqembu elihleliwe ngukuthi kufanele uthobele amashejuli nakho konke ukuvakashelwa okusekuhlelweni '. Ngakho-ke kubantu abaningi, ukuchitha isikhathi esithile lapho ufuna ukuba nokuningi kakhulu ukucindezela okuthile. Kwesinye isikhathi amaphuzu athile osuku ancipha. Ngoba akufani ukuhlela abantu abangama-30 kunokuhamba nje ababili. Ngakho-ke, inkinga yesikhathi ingenye yezinkinga kuleli cala. Ngeke sibe khona isikhathi sokuhlaziya futhi, futhi sizoba nabantu bayo yonke iminyaka. Ngakho-ke kuzohlala kudingekile ukuhambisana nazo zonke. Ngaphezu kokuthi uhambo lwalolu hlobo luvamise ukubiza kakhulu ngoba sihamba nakho konke osekuhleliwe futhi lokho kusho ukukhokhela lokho 'okungeziwe'
Ngemuva kokubona zombili izinketho ngokwehlukana futhi ungeze izinzuzo kanye nokubi, akukho njengokuthatha isitoko. Kuyacaca ukuthi kuzohlala kuncike ezidingweni zomuntu ngamunye. Ngoba uma ukhetha ukukhokha imali ethe xaxa kepha ukhohlwe ukuhlela, ukuthenga amathikithi futhi yenza ukubhuka, khona-ke into enhle kakhulu yiqembu elihleliwe. Vele, njengokuhlangenwe nakho kokuphila, mhlawumbe ukuhamba wedwa kuhlala kuyindlela enhle. Ngaphezu kwalokho ungakhetha ukwenza ngcono futhi umise amashejuli onquma wona kuphela.
Njengoba ubona, asikwazi batusa ukuhamba wedwa noma njengeqembu elihlelekile, ngoba kuzohlala kuncike kokuthandayo noma izidingo zakho. Kepha singakutshela ukuthi, okungenani kanye, zama zombili izinketho. Ngoba kuzona zombili uzothola izinzuzo okufanele uzijabulele. Uma kuvela noma yikuphi ukungalungi, khona-ke nakanjani sizokwazi ukukuxazulula ngendlela ephumelelayo. Futhi ungakhetha yiphi?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuhamba wedwa noma ngeqembu elihlelekile?
Ayenjani amasiko amaMaya